Waa maxay sababta uu ilmahaygu ka qayb waa in hawlaha dugsiga? | USAHello
Dugsiyada ee USA ka badan bixiyaan casharo ku samayn. Waxay bixiyaan fursado kale oo waa weyn, sida safarrada dibadeed, hawlo ka baxsan, dhacdooyinka, barnaamijyada dugsiga ka dib, iyo xerooyinka xagaaga. hawlaha dugsiga Kuwanu waa siyaabo weyn ee caruurta si aad u saaxiibada iyo guulaystaan ​​dugsiga! Ogow sida loogu caawiyo ilmahaaga ka qayb qaataan hawlaha dugsiga.
Dugsiyada iyo hay'adaha kale ee USA ka bixiyaan noocyo badan oo ka mid ah hawlaha iyo fursadaha kale ee dhalinyarada. Halkan waxaa ku qoran macluumaad ku saabsan qaar ka mid ah.
safarada macnaheedu waa kulan ka dugsiga in meelaha ay wax in lagu daro in wixii ay ku bartaan dugsiga baran karaan. Tusaalayaasha qaarkood waa matxaf degaanka, xarunta sayniska, ama goobta taariikhiga ah.
safarada yihiin dhacdooyinka inta badan oo xiiso leh, sababtoo ah ardayda hesho a "gacan-ku" waayo-aragnimo iyo nasasho ka joogtada ah ee caadiga ah ee fasalka. safarada mararka qaarkood lacag si looga caawiyo kharashaadka. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad saxiixdid foomka ogolaanshaha ah macalinka si aad ardayga milkiyadda dugsiga ku qaado.
hawlaha dugsiga ah manhajka dheeraadka ah
Dugsiyada badankoodu waxay rabaan in ay na baraan in ka badan casharada kaliya tacliimeed. Dugsiyada doonaya in ay baraan xirfadaha bulshada, ciyaaraha, iyo xirfadaha kale ee aan wax ku baray fasalka. hawlaha dugsiga waxaa lagu magacaabaa hawlaha manhajka dheeraadka ah. Inta badan hawlaha manhajka dheeraadka ah dhacaan gudaha dugsiga, laakiin ka baxsan fasalka. Ardaydu ma u leeyihiin in ay ka qayb galaan, oo iyagu ma ay heli fasalada.
Tusaalooyinka hawlaha aasaasiga ah manhajka dheeraadka ah ee ku jira kooxaha isboortiga, kooxaha music, iyo waxyaalaha ka soo baxa riwaayadaha. Dugsiyada qaarkood waxay leeyihiin kooxo badan oo dheeraad ah, sida ecology, speechwriting, cayaar, oo ka doodaya societies. Ardayda sidoo kale qori kartaa warqad arday ama noqon in dawladda ardayda.
Dugsiyo badan u ogolaan ardayda si ay u bilaabaan kooxda ama hawl cusub. Haddii mid ka mid ah carruurtaada uu doonayo inuu ku soo bilowdo koox danaha cusub, adiga ama waxay weydiin kartaa macallinka ama maamulaha wixii ay u baahan yihiin in la sameeyo.
Dugsiga ayaa qaban doona dhacdooyinka gaarka ah. dhacdooyinka ayaa laga yaabaa riwaayado, tartamada cayaaraha, kulan, qaab masrixiyada, ama kiniisadaha. Tusaale kale oo ay dhacdo dugsi waa xafladii abaalmarinta ah. Kuwani dhacdooyinka gaarka ah u muujiyaan waxa ay ardaydu sameeyaan oo ay bartaan, ka sokow dugsiga caadiga ah. dhacdooyinka dugsiga ku dari in ay dareenka bulshada in dugsiyo badan rabto.
Qoyska ma aha inay dhacdooyinka kuwan, laakiin dhigata waxay noqon kartaa mid aad u faa'iido leh ee ardayga iyo qoyska. Going to dhacdooyinka caawiya ardayga og nahay inaad tahay kuwa kibirka leh oo iyaga ka mid.
waxqabadka dugsiga oo isu dheelitira nolosha guriga
Ardayda ka qayb qaadata waxqabayada dugsi oo dheeraad ah u muuqdaan in ay leeyihiin calaamado fiican. hawlaha inta badan dhiiri ardayda inay sameeyaan fiican dugsiga sababta oo ah qaar ka mid ah run ahaantii u baahan yihiin ardayda u leedahay fasalada wanaagsan. Sidoo kale, ardayga waxaa laga yaabaa in ka badan oo dano inuu yimaado dugsiga. Tusaale ahaan, haddii xubin koox umana yimaado dugsiga, isaga ama iyada waxaa laga yaabaa in aan loo oggolaan in ay ka qaybqaataan dhaqanka maalintaas ayaa.
Helitaanka dheelitirka u dhexeeya tacliinta iyo hawlaha ka baxsan wuxuu noqon karaa mid adag. Dugsiyada badankoodu saaray muhiimadda guusha tacliimeed. Ardayda dhibaato ka mid ah ama ka badan fasalada tacliinta u baahan kartaa caawimaad dheeraad ah ka macalimiinta ka hor inta sii waxqabadyada dugsiga ay doorteen.
Ardayda sidoo kale waa in dheelli shaqada dugsiga la mas'uuliyadaha guriga. Tusaale ahaan, walaalaha ka weyn dad badan oo is ogow of walaalaha ka yaryar oo walaalahoodii gabdhaha dugsiga ka dib. Taasi ka dhigi kara wax adag ka qayb qaataan hawlaha dugsiga ka dib ama samayn shaqada guriga.
Ardayga iyo isaga ama iyada qoyska waa in go'aan ka waxa ugu muhiimsan ee ardayga. mudnaanta dugsiga ee caadiga ah waa guusha waxbarashada. Laakiin qaar ka mid ah qoysaska laga yaabaa in ay leeyihiin mudnaanta kala duwan.
Labada siyaabaha ugu fudud ee ardayda si ay u sameystaan ​​saaxiibo dugsiga waa in la hawlan fasalka iyo in ay ka qayb qaataan hawlaha dugsiga. The more arday lug ku leh nolosha dugsiga, ayaa in ka badan isdhexgalka ay si shakhsi dadka kale la kori doono. Tani waxay kaa caawin kartaa saaxiibo dhigi.
Macalimiin badan oo laga caawiyo isdhexgalka ardayga marka ay awoodaan. Waxaad sidoo kale ku dhiiri gelin kartaa ardaygaaga in ay la hadlaan dadka dugsiga xataa haddii ay yihiin xishood.
Dugsiyada qaarkood ururo kale u shaqeeyaan si ay u bixiyaan barnaamijyada dugsiga ka dib. Barnaamijyadan waxay ku kala duwan yihiin. Waxay waxaa loogu tala galay si loo kobciyo waayo-aragnimada waxbarashada ardayga, siiyaan taageero tacliimeed, ama outlet ah ee tamarta dhex dhaqdhaqaaqa jirka. lataliyaha waa khayraadka weyn helitaanka barnaamijyada.
Waxaa sidoo kale jira barnaamij kuwaas oo siiya taageero loogu tala galay ardayda dugsiga ka hor iyo, mararka qaarkood, inta lagu jiro maalinta dugsiga. Inta badan barnaamijyadan waxaa qabanqaabiya maamulka dugsiga. Lataliyayaasha guud waxay kaa caawinaysaa inaad ogaato oo ku saabsan barnaamijyada.
dugsiyada oo dhan ma leeyihiin barnaamijyo iskuulka. Lataliyayaasha guud waxay laga yaabaa inay awoodaan inay kaa caawiyaan inaad hesho barnaamijyada dhow. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in baadhaan FindHello barnaamijyada dhalinyarada kuu dhow. Dooro luqadaada. Markaas galaan magaalada ama cinwaanka. Markaas dooran category ah “Carruurta & Teens.”
Waxaad ka heli doontaa xeryaha dummer oo dhan guud ahaan USA inta lagu jiro June, July, iyo August markii dugsiyada waa fasax. xeryaha Summer waa fursad ay ardayda si loo horumariyo xirfadaha iyagu ma ay bartaan dugsiga. xeryaha Summer caawiso in ay carruurtu yeeshaan xirfadaha bulshada. xeryaha Day dhici kaliya inta lagu jiro maalinta, Isniinta ilaa Jimcaha. ardayda xeryaha ciidankii Residential ama "seexan iska" dhowr habeen ama toddobaad oo isku xigta. xerooyinka xagaaga waxay noqon kartaa hal maalin, hal todobaad, ama dhowr toddobaad dheer.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan xeryaha xagaaga ee meelaha gaar ah, waxaad ka codsan kartaa dugsiga hoose.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa xerooyinka xagaaga baadhi online. Ku qor ereyada "xerooyinka xagaaga ee [magacaabi magaalada aad]."
Dawlada Hoose oo badan, ururada samafalka iyo bulshooyinka diimeed bixiya xeryaha xagaaga iyo barnaamijyada xagaaga. sida caadiga ah waxay lacag, laakiin dalab ugu “deeq waxbarasho” (kharashka hoose ama bilaash ah) waayo dakhligoodu hooseeyo ama ardayda qaxootiga.